नेकपा कम्युनिष्टको नाममा कलंकः विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला - Jhapa Online
नेकपा कम्युनिष्टको नाममा कलंकः विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला
गौरादह, २२ असोज । नेपाली राजनीतिमा सदाबहार प्रतिपक्षको भूमिका रहने व्यक्तिको रुपमा परिचित राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले नेपालको संविधान जालझेल पूर्ण दस्तावेज मात्र भएको बताएका छन् ।
युथ नेटवर्क दमकद्वारा आयोजना गरिएको मधेसको समस्या विषयको अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यस्तो बताएका हुन् । २०७२ मा जारी गरिएको संविधान काइते, कीर्ते भएको उनले बताए ।
जालझेल पूर्ण तरिकाले लेखिएको संविधानको फेद टुप्पो सबै गाँठो परेकाले समाजमा यसले नकारात्मक परिणाम दिन थालेको उनको तर्क थियो । मधेसको मुद्दालाई अहिलेको सरकारले कुनै पनि हालतमा सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनले नेकपालाई कम्युनिष्टको नाममा कलंक भएको टिप्पणी गरे ।
मधेसी दलहरु सत्तामा जानको लागि बनाइएको भ¥याङ् भएकाले उपेन्द्र जी, राजेन्द्र महतो र अन्य मधेसी नेताहरुले मधेसको एजेण्डा सर्वनाश पारेको उनको भनाइ थियो । मधेसको हितको लागि मधेसी दलहरुसँग केही भरोसा थियो तर सबैलाई नेकपाले सत्तामा लगेर राखिदियो, उनीहरु त्यहाँ पुग्नको लागि मात्र लडेका रहेछन् – संग्रौलाले आक्रोश पोखे ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आपैmँ संघीयताको आयु ८ वर्ष मात्र छ भन्दै हिँड्नु हुन्छ । के १६ हजार नेपालीको बलिदान र हजारौँ परिवारको जीवनयापन तहसनहस गराउनको लागि रचिएको जनयुद्धको परिणाम यही हो ? — संग्रौलाले प्रश्न गरे ।
मधेसमा हुर्किएको सभ्यताबाटै सिंगो मुलुकलाई एकतामा बाँध्न सकिएको उदाहरण दिँदै उनले तराई, पहाड र हिमाललाई एकताको डोरीमा बाँध्ने मुख्य आधार तराईको संस्कृति र सभ्यता नै भएकोमा गौरव गर्न सक्नुपर्ने तर्क गरे । राजा महेन्द्रको समयमा चलाइएको औँलो नियन्त्रण पछिको पुनर्बास योजनाले तराईमा रहेका वास्तविक आदिबासीहरु उपेक्षित हुन थालेको बताए । उनले भने, ‘तराईको वास्तविक आदिबासी थारुहरु हुन् भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गरेको छ ।’
कार्यक्रममा सामाजिक विष्लेशक तथा मधेस सम्बन्धी ज्ञाता चन्द्रकिशोर झाले समेत धारणा राखेको थिए । लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका झालाई मधेसको विष्लेशकका रुपमा पनि हेरिने गरिन्छ । ‘दशगजामा घर खेती भएको एउटा मधेसी मुलको नेपालीले जति यो देशलाई माया गर्छ, त्यति माया काठमाडौंमा घर भएको नेपालीले दिन सक्दैन’, उनले भने, ‘तपाईंले देशको सिमाना सारिएकोे भोलि पल्टको अखबार पढेर थाहा पाउनु हुन्छ तर त्यो दशगजामा रहेको नेपालीको धान बाली खोसिएको समाचार तपाईंले पढ्नु भएको हो । उसको लहलह परेको धान बाली राति नै भारतीयको कब्जामा जाँदा पहिलो पल्ट कसको मन रोयो होला, तपाईंको कि धान खोसिने मधेसी को ?’
झाको घर तराईको जिल्ला सर्लाहीको दशगजा भित्रै रहेको उनी बताउँछन् । मलाई मेरो आमाले बाल्यकालमा पढाएको देश भक्तिको पाठ मैले काठमाडौँको कुनै विश्वविद्यालयको प्राध्यापकले पढाएको भन्दा कम थिएन । आमा सधैँभरि मामली घरको पिर गरी राख्नु हुन्थ्यो । अचानक मलाई बोकेर मामली जानुहुन्थ्यो, उनले स्मरण गर्दै भने, ‘एकदिन हामी मामली पुग्न सकेनौँ । आमाले यति मात्र भन्नुभयो– ‘मामली घरलाई पानीले डुबायो, दुस्मनले घर भत्काई दियो, अब जान सकिंदैन ।’
त्यो बेला मैले टुलुटुलु आमाको अनुहारमा हेरेको थिएँ– ‘उनले भावुक हुँदै मधेसको वास्तविकता औँल्याए । आमाले सारीको फेरले आँसु पुस्दै मलाई पिठ्युमा बोकेर घर फर्किनुभएको थियो । जब म ठूलो भए अनि मात्र थाहा भयो आमाको आँखामा आएको आँसु त राष्ट्रियताको आँसु रहेछ । त्यस पछि मैले कहिल्यै मामाघर जान पाइन । किनकी त्यो घर राति नै भत्काइएको थियो र खेत भारतीय भूमि भइसकेको थियो । मेरो मामलीहरुसँग भेट भएता पनि मामली घर भनें कहिल्यै जान नपाउने गरी बिलाएको थियो त्यो नै मैले मेरी आमाबाट सिकेको राष्ट्रभक्ति थियो ।
झाले प्रश्न गरे – के त्यो समाचार तपाईंले कहिल्यै अखबारमा पढ्न पाउनुभयो वा फेसबुकमा पढ्नु भयो ? कार्यक्रममा दमक क्षेत्रका राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, बुद्धिजीविलगायत उद्योगी व्यवसायीको उपस्थिति रहेको थियो ।